ISITATIMENDE ESIKHULULEKILE NOKUFAKA KWE-GDPR - yezitolo zokuthenga24.com - SD24
Ikhaya > ISITATIMENDE ESIKHULULEKILE NOKUQHUBA KWE-GDPR
shoppingdirect24.com - Inqubomgomo Yobumfihlo ye-SD24
- Siyaqiniseka ukuthi sithobela yonke imibandela efanele
Bheka lesi sixhumanisi ngolwazi oluthe xaxa mayelana ne-GDPR:
- Asisebenzisi idatha yakho ngaphandle kokudingekile ukuqhuba ibhizinisi nawe
kanye nokwenza ngcono isayithi lethu ukuze uthole ukuthenga kwakho okuhle kakhulu.
- Asithengisi idatha yakho.
- Asisebenzisi idatha yakho yokumaketha noma ukukhushulwa ngaphandle kwemvume yakho ecacile.
- Silungise isitolo sethu ku:
" Ungalandeli amakheli e-IP agcwele futhi ubonise wonke amakheli e-IP ohlelweni.
Ngenxa yokucutshungulwa kwe-GDPR, ikheli le-IP lomsindo liye laphoqelelwa kubo bonke abasebenzisi. "
- Sisebenzisa izinhlelo zokusebenza zamathuluzi namathuluzi ukuhlaziya isitoreji sesithameli esitolo kuphela kumafomu ahlanganisiwe. Ngokuqinisekile sicela uqaphele ukuthi asiqoqi noma sitholakale ulwazi lwakho lomuntu siqu, njengegama, ikheli, inombolo yocingo noma i-imeyili, ngaphandle kwalokho okuhlinzekwe nguwe kumongo wokuthenga komkhiqizo. Asisebenzisi ulwazi olunjalo lomuntu siqu kunoma yiziphi izinhloso zezibalo.
- Ukutholakala kolwazi lwesithathu noma ukudluliswa kwemininingwane yakho kwenziwa kuphela noma kunikezwe ngesisekelo sokwazi (isibonelo kubanikezeli bemikhiqizo / abathumeli kanye nezinqubo zokukhokha) kanye nokuziphatha okuqondile kwebhizinisi nawe, sicela ubheke imininingwane ngezansi.
Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza indlela ulwazi lwakho lomuntu siqu oluqoqwe ngayo, olusetshenziselwayo, nolwabelwana ngenkathi uvakashela noma uthenga ukuthenga kusuka shoppingdirect24.com ("iSayithi").
Uma uvakashela iSayithi, siqoqa ngokuzenzakalelayo ulwazi oluthe xaxa mayelana nedivayisi yakho, kufaka phakathi ulwazi mayelana nesiphequluli sakho sewebhu, ikheli le-IP, indawo yesikhathi, indawo kanye namanye amakhukhi afakwe kudivayisi yakho. Ukwengeza, njengoba upheqa leSayithi, siqoqa ulwazi mayelana namakhasi wewebhu noma imikhiqizo oyibhekayo, yiziphi amawebhusayithi noma amagama okucinga awakhulume kuSayithi, nolwazi mayelana nokuthi uxhumana kanjani neSayithi. Sibhekisela kulemininingwane eqoqwe ngokuzenzekelayo njenge "Ulwazi Lwedivayisi".
- "Amafayela we-Log" izenzo zethrekhi ezenzeka kuSayithi, bese uqoqa idatha kuhlanganise nekheli lakho le-IP, indawo, indawo yesiphequluli, umnikezeli wesevisi ye-intanethi, amakhasi okubuka / okuphumayo, kanye nezitembu zesikhathi / isikhathi.
Njengoba kuchazwe ngenhla, singasebenzisa Ulwazi lakho lomuntu siqu ukukunikeza izikhangisi ezihlosiwe noma ukuxhumana okukhangisa esikukholelwayo kungase kukuthande. Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nokuthi ukukhangisa okuhlosiwe kusebenza kanjani, ungavakashela ikhasi lokufundisa le-Network Advertising Initiative ("NAI") ku-http: //www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Silungise amathuluzi wokuqoqa idatha kanye nezinhlelo zokusebenza ukuhlonipha ukulandelela izicelo, kuze kube yilapho kutholakala khona inketho.
Ngokusebenzisa i-website yethu, wena (isivakashi) uyavuma futhi uvumela ukuvumela abantu besithathu ukuba bahlaziye ikheli lakho le-IP, ukuze banqume indawo yakho ngenhloso yokuguqulwa kwemali. Uyavuma futhi ukuthi lokho kulungiselelwa kwemali kugcinwe kwikhukhi yeseshini kusiphequluli sakho (ikhukhi yesikhashana ekhishwa ngokuzenzakalelayo uma uvala isiphequluli sakho). Senza lokhu ukuze i-currency ekhethiwe ihlale ikhethiwe futhi ingaguquguquki uma upheqa iwebhusayithi yethu ukuze amanani angaguqulele kumuntu wakho (isivakashi) lwemali yendawo.
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nemikhuba yethu yobumfihlo, uma unemibuzo ethile, noma uma ungathanda ukukhalaza, sicela uxhumane nathi nge-imeyili